Iphrofayili yoMbulali oyisiXhosa uRobert Berdella
Iprofayili yomnye wabantu abanobudlova obuthathaka kwiimbali zase-US abaye bathatha inxaxheba ezenzweni zokuxhatshazwa ngokwesini kunye nokubulala eKansas City, eMissouri, phakathi kuka-1984 no-1987.
Iminyaka emncinci yeBergella
URobert Berdella wazalwa ngo-1949 eCuyahoga Falls, eOhio. Intsapho yaseBergella yayingumKatolika, kodwa uRobert washiya ibandla xa wayeseneminyaka elishumi.
U-Berdella waba ngumfundi ontle, nangona wayekhathazeka kakhulu.
Ukuze abone, wayefanele agqoke iiglasi ezigqinsileyo, ezenza ukuba yena angakwazi ukuxhatshazwa ngabaontanga bakhe.
Uyise wayeneminyaka engama-39 ubudala xa efa ngenxa yokuhlasela kwentliziyo. UBerdella wayeneminyaka eli-16 ubudala. Kungekudala emva koko, unina washada kwakhona. U-Berdella akazange akwazi ukufihla intukuthelo yakhe nomsindo wakhe kumama nonina.
Ngo-1967, uBerdella wanquma ukuba nguprofesa waza wabhalisa kwi-Kansas City Art Institute. Ngokukhawuleza wagqiba ekubeni utshintsho lwemisebenzi kwaye wafunda ukuba yi-chef. Kwakuye ngeli xesha ukuba iingcamango zakhe malunga nokuhlushwa nokubulala zaqala ukuqhuma . Wafumana ukukhulula ngokuhlambalalisa izilwanyana, kodwa nje ixesha elifutshane.
Xa wayeneminyaka eyi-19 ubudala, waqala ukuthengisa iziyobisi nokusela utywala obuninzi. Wabanjwa ngenxa yokufumana i-LSD kunye ne-marijuana, kodwa izityholo azizange zihlangane.
Wacelwa ukuba ashiye ikholeji ngonyaka wakhe wesibini emva kokubulala inja ngenxa yobugcisa. Kwabambalwa emva koko, wasebenza njengompheki, kodwa wayeka waza wavula ivenkile ebizwa ngokuba nguBob's Bazarre Bazaar eKansas City, eMissouri.
Ivenkile ekhethekileyo kwizinto ezinobomi ezibhenela abo banomdla omnyama kunye nomoya. Emalunga nommandla, wayeyicatshulwa kodwa ayithandile kwaye wabandakanyeka ekuququzeleleni iinkqubo zokubukela zoluntu zoluntu. Nangona kunjalo, ngaphakathi kwendlu yakhe, kwafumaniswa ukuba uRobert 'Bob' Berdella wayehlala kwihlabathi elilawulwa ubugqila obunzima, ukubulala nokuhlushwa .
Yintoni eqhubekayo phambi kwamagumbi okuvalwa:
Ngomhla ka-Aprili 2, 1988, ummelwane wathola insizwa egumbini lakhe yambethe kwikhola yeenja kuphela eboshwe entanyeni yakhe. Le ndoda yatshilo ummelwane ngengcamango engathandekiyo yokuxhaphaza ngokwesondo ebenokuyinyamezela ezandleni zaseBergella. Amapolisa abeka iBerdella esitokisini aze afune ikhaya lakhe apho iifoto ezingama-357 zamaxhoba kwiindawo ezahlukeneyo zokuhlushwa zafunyanwa. Kwakhona kwakukho izixhobo zokuhluthwa, iincwadi zobugqi, izambatho zendlela, izakhono zomntu kunye namathambo kunye nentloko yomntu eYardd's yard.
Iifoto Zichaza Ukubulala:
Ngo-Ephreli 4 amagunya anesibonakaliso esingqongqo sokumangalela uBerdella kwizinto ezisixhenxe ze-sodomy, esinye sezibambiso zokugweba kunye ne-akhawunti enye yokuhlaselwa kwe-degree. Emva kokuhlolisisa ngakumbi iifoto, kwafumanisa ukuba amadoda angama-6 amadoda angama-23 achongiweyo abulawe. Abanye abantu kwimifanekiso babekho ngokuzithandela kwaye bathathe inxaxheba kwimisebenzi enobuhlungu kunye nexhoba.
IDay Torture Diary:
I-Berdella yasungula 'iMithetho yeNdlu' eyayimiselweyo kumaxhoba okanye ayengozini yokubetha okanye yokufumana ukutshitshiswa kwamandla kwiindawo ezibucayi zemizimba yazo. Kwidayari ecacileyo yokuba uBerdella wagcina, wathatha iinkcukacha kunye nemiphumo yokuhlushwa wayeya kubabeka phantsi kwixhoba lakhe.
Kubonakala sengathi unomdla wokusebenzisa iziyobisi, i-bleach, kunye nezinye i-caustics emehlweni kunye nomqala wexhoba lakhe ngokudlwengulwa okanye ukufaka izinto zangaphandle ngaphakathi kwazo.
Akukho Isibonakaliso Semizekelo KaSathana:
NgoDisemba 19, 1988, iBerdella wathwesa inetyala kwinani elilodwa lokuqala kunye nakwezinye iziphumo ezine zokubulala abantu abesibini.
Kukho iinzame zemicimbi eyahlukeneyo yemithombo yeendaba ukuba uzame ukudibanisa ulwaphulo-mthetho lwe-Berdella kwingcamango yehlabathi likaSathana elingaphantsi komhlaba kodwa abaphenyi baphendule ukuba abantu abangaphezu kwama-550 babuzwa udliwano-ndlebe kwaye akukho naluphi na uphawu lokuba ulwaphulo-mthetho luhlangene noSathana isiko okanye iqela.
UBerdella wathola ubomi entolongweni apho wafa ngesifo senhliziyo ngo-1992 emva nje kokubhalela umfundisi wakhe incwadi eya kuthi amagosa asejele awazange amnike imithi yakhe.
Ukufa kwakhe akuzange kuphandwe.
Ezinye zee-YouTube zeDivest Videos Videos zenziwe
Ukubhala Inqaku elichazayo okanye iSitatimende somntu siqu
Iinkcukacha zomntu onobuThixo
Ukupheka kwi-Beltane Sabbat